musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Zvinonakidza, Zvinonakidza Chokwadi NezveCaribbean
The Caribbean inzvimbo inopisa inozivikanwa nemahombekombe machena-jecha, mazuva marefu, husiku hunotonhorera, uye mikana yekushanya. Nekudaro, kune zvakawanda zvakawanda kudunhu kupfuura izvo zvinhu. Kunyangwe uri kuronga zororo ikoko kana kuti uchingofarira kudzidza zvakawanda nezve nzvimbo dzakasiyana kubva kutenderera pasirese, hezvino zvimwe zvinonakidza chokwadi nezve Caribbean zvaungasaziva.
Ndiyo Yakakurumbira Cruise Destination
Nepo iwe uchigona kuenda chero kupi zvako munyika muchikepe chekufamba, iwe unenge wakamanikidzwa-kumanikidzwa kuwana rwendo rwechikepe rusina kana pasuru imwe chete inoenda kuCaribbean, ine inonyanya kufarirwa. kuve kumabvazuva kweCaribbean cruise. Kunyangwe mafambiro anotarisa kune dzimwe nzvimbo anogona kunge anosanganisira mashoma eCaribbean ports.
Ihombe Kupfuura Zvaungafunga
Kunyange zvazvo United States iine zvigaro uye nharaunda muCaribbean, vanhu vanowanzofunga nezvazvo sechinhu chakasiyana uye kunze kwenyika kuUnited States. Zvakangodaro, Florida inogona kutorwa sechikamu cheCaribbean, zvichireva kuti chero rwendo rwunosimuka kubva kuFlorida port hunyanzvi rwendo rweCaribbean zvisinei nekwaunoenda. Zvinowanzo fungwa nevanhu seCaribbean zvine zvitsuwa zvinopfuura zviuru zvinomwe (zvizhinji zvisingagarwi) uye 7,000% yemakorari ese ari munyika. Mesoamerican Barrier Reef ndiyo yechipiri chete kuGreat Barrier Reef muPacific muhukuru. Sezvineiwo, makorari pasi rose ari kupera.
Kune Multiple Indigenous Cultures
VaArawak nevaTainos angori mapoka maviri eMarudzi anowanikwa kuCaribbean Islands. Aya ndiwo maviri emapoka ayo Christopher Columbus akasangana nawo parwendo rwake rwemuzana ramakore rechi 15 kuti awane nzira pfupi yokuenda kuIndia kubva kuEurope. Hupenyu hwevanhu veIndigenous hwakawedzera kuoma mushure mehukoloni. Vese vanhu netsika dzavo vakapona nepaburi retsono. Kunyanguvezvo, zvichiri kukosha kutsika dzomunzvimbomo dzezvitsuwa nanhasi.
Muma latitudes epamusoro, gore rakakamurwa kuva mwaka ina inosiyaniswa. MuCaribbean, uko tembiricha isinganyanyi kunyura pasi pe80 degrees, pane mwaka miviri chete, inosiyaniswa kwete netembiricha asi nekunaya. Zhizha rinonyorova nepo chando chiri kuoma. Izvi zvinoita kuti ive yakanaka kune vashanyi vari kutsvaga kutora zororo kubva kunotonhora nechando.
Kune Active Volcanoes
Hazvisi zvese zveCaribbean Islands zvinoputika. Zvisinei, pakati peavo varipo, pane 19 ayo anogona kuputika zvakare pane imwe nguva, nokukurumidza kana kuti gare gare, achiita kuti vararame. Izvozvo hazvirevi kuti dzinogara dzichiputika, uyewo hazvibviri kufanotaura kuti kuputika kuchaitika rini chaizvo. Dzimwe dzenzvimbo dzinogara makomo anoputika muCaribbean dzinosanganisira zvitsuwa zveSt. Kitts neNevis, Dominica, St. Lucia, Grenada, St. Vincent, neMartinique. Zvimwe zvitsuwa zvisiri zvekuputika kwemakomo zviri pedyo zviri mungozi yetsunami, madota, uye dzimwe njodzi dzekuputika kwemakomo.
Nguruve Dzakatora Imwe Yezvitsuwa
Exuma chitsuwa chisingagarwi chiri chikamu cheBahamas. Hakugarwi nevanhu, ndiko kuti, asi musha wenguruve dzemhuka. Idzi nguruve dzakaunzwa kuCaribbean neveEuropean colonists, asi hazvisi pachena kuti dzakaguma sei pachitsuwa. Zvakajeka ndezvekuti vanofarira kupedza mazuva avo pamhenderekedzo yegungwa, vachishambira mumvura kuti vagare vachitonhorera. Kune nzendo dzinotora vashanyi kune zvitsuwa kuti vaone nguruve pedyo. Ungatokwanisa kufamba navo chero bedzi ukaramba uri kure zvine ruremekedzo.
Ndiyo Nzvimbo Yekuzvarwa kwaRum
Nhoroondo, maCaribbean anga ari mugadziri mukuru wenzimbe, iyo inonyungudutswa kuita rum. Mweya wechidhakwa wanga uri musimboti wezvehupfumi mudunhu kubva ipapo, nechitsuwa chekutanga chinozivikanwa kuchigadzira chekutengesa chiri Jamaica.
The Caribbean inzvimbo yekare uye yakasiyana-siyana ine yakaoma asi inonakidza yapfuura. Iine zvakawanda zvekupa avo vanosarudza kushanya, uye kunyangwe avo vasingakwanise vanogona kubatsirwa nekudzidza zvakawanda nezvazvo.
November 6, 2021 pa 14: 38
Exuma iketani yezvitsuwa mazana matatu nemakumi matanhatu zvinodaidzwa kuti cays ZVISINA kugarwa, chokwadi pane chimwe chinhu pakati pe365 kusvika 7000 vanhu vanogara kunyanya pachitsuwa chikuru, Great Exuma, uye mune zvimwe zvitsuwa zveketani….
Nguruve dzakaiswa pachitsuwa chisina vanhu pamberi pe2000 NYE apo vanhu vose vaitenda kuti nyika yakanga ichiuya kumagumo uye vakanga vachiunganidza zvokudya nenzira iyo. Vafambisi vezvikepe vakamira pabay ipapo vakatanga kutora mapikicha enguruve idzi uye izwi rikaparadzirwa munyika yekushanya uye dzikave inokwezva… ..